चिनियाँ समृद्धि र नयाँ नेतृत्व – Sourya Online
चिनियाँ समृद्धि र नयाँ नेतृत्व
सौर्य अनलाइन २०६९ मंसिर ११ गते ०:२० मा प्रकाशित
सन् २०१२ को नोभेम्बर महिना समकालीन विश्व राजनीतिमा दुई महत्त्वपूर्ण सुखद र सर्वाधिक चर्चित परिघटना भएका छन् । विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बाराक ओबामा आगामी चार वर्षका लागि पुन: निर्वाचित भएका छन् । आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेका ओबामाको वर्तमान कार्यकाल अन्तिम हुनेछ । अमेरिकाको इतिहासमा अश्वेत त्यसमा पनि दोस्रो र अन्तिम पटक विश्वकै शक्तिशाली मानिने अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी ओबामाले पाए । विश्वव्यापी निकायहरू, विश्व अर्थव्यवस्था र अधिकांश मुलुकमा निर्वाध प्रभाव स्थापित गर्दै आएको अमेरिकाको निर्वाचनमा धेरै खाले अनुमान र जोडघटाउ भएका थिए । ओबामाको पुनरावृत्तिका कारण अमेरिकी नीति, कार्यदिशा र विश्वव्यापी विगतभन्दा खासै फरक नहुने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । त्यसै भएर होला, अमेरिकाको यो निर्वाचन परिणामपछि खासै चर्चाको उचाइमा रहेन । यदि, उनका प्रतिस्पर्धी मिचेलले निर्वाचन जितेको भए निर्वाचन चर्चा, अमेरिकी नीति र कार्यदिशालगायत विषयहरू बहुआयामिक र वर्तमानभन्दा निकै फरक हुन सक्थ्यो । अमेरिकी नागरिकले धेरै जोखिम लिन चाहेनन् र बढी यथास्थिति र कम परिवर्तनको बाटो रोजेका छन् । उनले कार्यभार सम्हालेपछि चर्चा र प्रभाव छिटै सामान्यीकरण भएको छ । यतिखेर विश्वको चर्चा र ध्यान सिधै दोस्रो महाशक्ति राष्ट्र चीनतिर मोडिएको छ ।
यसपटक संयोग परेको छ, नोभेम्बर महिनामा नै विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चीनमा त्यहाँको एक मात्र सत्तासीन पार्टी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा रहेको उक्त पार्टीको महाधिवेशनले पार्टीको महासचिव र विश्वकै ठूलो सैन्यसंरचनाको प्रमुखमा सी जिनपिङलाई स्थापित गरेको छ । कुनै बेला सामन्ती शासन र औपनिवेशिक परिवेशबाट गुज्रिएको चीन क्रान्ति र परिवर्तनपछिको कुशल व्यवस्थापन र आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिको यात्राले आज विशाल र अपत्यारिलो सफलता हासिल गरिरहेको छ । ‘हाम्रो जनताको जीवनप्रतिको आकांक्षा छ । उनीहरू राम्रो शिक्षा, स्थायी काम, धेरै आम्दानी, राम्रो सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुध्रिएको बसोबास र वातावरण चाहन्छन् । जनताको राम्रो जीवनको चाहना पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।’ महासचिवमा निर्वाचित भएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीका यो अभिव्यक्तिले चीनको नयाँ नेतृत्व परिपक्व र चिनियाँ महाअभियानमा दृढतापूर्वक अघि बढने तत्परताको पुष्टि गर्दछ ।
आज चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य संख्या आठ करोड २० लाख पुगेको छ र छिट्टै नै त्यो संख्या साढे आठ करोडको हाराहारीमा पुग्दै छ । यति ठूलो पार्टीको नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापन पक्कै सहज नहोला । दस वर्षमा नेतृत्वको अनिवार्य परिवर्तनको इतिहास चीनले अघि बढाएको छ । महाधिवेशनले नौ सदस्यीय स्थायी समितिमा सात जना, पार्टी महासचिव, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जनकांग्रेसका सभापतिलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट बिदा गरेको छ र उनीहरू जनकांग्रेसबाट पनि बिदा हुँदै छन् । नेतृत्व आपैँmमा शिक्षित र दिक्षित पनि छ । सीले रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर र राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् भने उनको नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको करिव ९६ प्रतिशतले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन् । हाम्रो र अन्य मुलुकमा राजनीति र सत्तामा रहने अवधिको सीमा र शिक्षाको कुनै अनिवार्यता नभएको परिवेशले चीनबाट अनेकौँ अलावा यो शिक्षा पनि ग्रहण गर्नु जरुरी छ । वर्तमान चिनियाँ समृद्धि र कुशल नेतृत्वका बाहक निवर्तमान महासचिव र वर्तमान राष्ट्रपति हु जिन्ताओको उतराधिकारीको रूपमा देखिएको सी चार महिनापछि हुने राष्ट्रिय जनकांग्रेसबाट सम्भवत: राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् । ५९ वर्षीय सी जिनपिङ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचौ उच्चपदस्थ नेता र पुस्ता मानिन्छ र उनी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओका सहकर्मी सी जोन्गसुनका छोरा पनि हुन् ।
‘माक्र्सवादमा आस्था र समाजवाद तथा साम्यवादमा विश्वास एउटा कम्युनिस्टको राजनीतिक आत्मा तथा आध्यात्मिक आधार हो, जसले कुनै पनि अग्निपरीक्षाको सामना गर्न सक्ने बनाउँछ । यसलाई अझ सुन्दर शव्दमा भन्ने हो भने आदर्श तथा विश्वास नै कम्युनिस्टहरूको आध्यात्मिक क्याल्सियम हो’ सीको यो अभिव्यक्तिले माक्र्सवादको भविष्य नदेख्ने बुर्जुवा चिन्तन र माक्र्सवादरहित सुधारिएको समाजवादमा जान चाहने संशोधनवादी कम्युनिस्ट र माक्र्सवादलाई जडसिद्धान्त मान्ने जडसूत्रवादी चिन्तन अनि सनातन चिनियाँ क्रान्तिलाई आफ्नो आधार मान्नेहरूलाई चोटिलो जवाफ दिएको छ । आज चीनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू चीनको वर्तमान सत्तासँग सन्तुष्ट छन् । त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको जनउत्तरदायी नेतृत्वको महाअभियानलाई सफल बनाउन आम नागरिक जुटेका छन् । जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र क्षेत्रफलका हिसाबले तेस्रो ठूलो मुलुक चीनले केही वर्षयता हासिल गरेको तीव्र आर्थिक समृद्धिले दोस्रो हुँदै छिट्टै नै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । करिव साढे दुई दशक अघि विश्वको महाशक्तिराष्ट्र सोभियत संघको विघटनपछि विश्व अर्थव्यवस्थामा अमेरिकाले एकल नेतृत्व र हैकम जमाएको थियो । त्यसलाई चुनौति दिँदै चीन विश्वको महाशक्ति राष्ट्र र पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने दौडले विश्व जनमतलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । युरोपमा भएको एक मतसर्वेक्षण अनुसार अबको चार वर्षमा विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा चीन स्थापित हुनेछ ।
वास्तवमा आधुनिक चीनको यात्राले एक शताव्दि पार गर्दै छ । सन् १९११ मा डा. सनयातसेनको अगुवाइले सामन्ती राजतन्त्रात्मक प्रणालीको अन्त्य गरी पुँजीवादी गणतन्त्रको प्रारम्भ गर्‍यो । तर, त्यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीको नाममा स्थापित र दिगो हुन सकेन । लामो गृहयुद्ध र चिनियाँ मुक्ति आन्दोलनपछि सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हालेपछि समाजवादी शासन प्रारम्भ भयो । चीनसँग आफ्नो विकासको ऐतिहासिक अनुभव थिएन । उसले कम्युनिस्ट शासनको प्रारम्भमै पश्चिमा उदार पुँजीवादी विकासको बाटो अस्वीकार गरेको थियो । तत्कालीन सोभियत संघभन्दा भिन्न परिवेश, पछौटेपन् र गरिबीको कारण त्यसको अन्धानुकरण पनि सम्भव थिएन । यसैले उसले आफ्नै मौलिक र विशिष्ट विकास प्रयास अघि बढायो । उत्पादनका साधनहरू उत्पादक शक्तिबीचको सम्वन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्दै त्यसलाई सामुदायिक अभियानको रूपमा सूत्रवद्ध गर्‍यो । राज्यले नागरिकको गाँस, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिको वातावरण निर्माण गर्‍यो । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचनामा व्यापक रूपान्तरणले समृद्धि अभियानलाई तेज बनायो । आफ्नो आन्तरिक संरचना र शक्तिसन्तुलन नखलबलिने गरी विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई भित्र्याउँदै न्यूनतम लागतमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई विश्वबजारमा निर्यात तीव्र बनायो । परिणामत: विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्यातक राष्ट्रको रूपमा चीनले आफूलाई उभ्याएको छ । चीनसँग रहेको अथाह जमिन, जनशक्ति र प्रविधिलाई उचित सन्तुलनले तीव्र औद्योगिक रूपान्तरणको स्वरूप लियो ।
आज चीनका सामु अवसर मात्रै होइन चुनौति पनि छ । चीनको आर्थिक समृद्धि र प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई गतिशीलता दिन सक्नु आपैँmमा एक चुनौति हो । तिब्बतलगायतका आन्तरिक समस्याहरू, उदार अर्थतन्त्रको किस्तावन्दी प्रयोगका पक्षहरू र विभिन्न समस्याहरूलाई नयाँ नेतृत्वले सामना मात्रै होइन समाधान नै दिन सक्नुपर्दछ । चीनमा पनि गरिबी, असमानता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतन्त्रता एवम् सामाजिक सुशासनका समस्याहरू नभएका होइनन् । शान्ति, समृद्धि, समानता, सदाचार र तीव्र विकासका पाइलालाई चीनले थप व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । चीनसँग दक्षिणतर्फ गाँसिएको हाम्रो मुलुकले चीनको प्रगतिबाट सिक्नु आवश्यक छ । हाम्रो राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको अभियानमा चीनको सदासयता र सहयोगको पनि त्यतिकै जरुरी छ । सीको नेतृत्वको चीन सफलताको पथमा अघि बढोस् र हामी नेपालीप्रति सदभाव र विकास सहयोगमा तत्परता जारि रहोस् ।
प्रेमको विज्ञान : यथार्थ दृष्टिकोण
हरिवोधनी एकादशी र तुलसीको महत्व
वैकल्पिक राजनीतिक दल किन असफल हुन्छन् ?
भगवान् विष्णुका अवतार र एकादशी
आजदेखि महिला हिंसाविरुद्धको अभियान
कश्मीरमा आतंककारी हमलामा परि नेपाली युवा प्रेम केसीको मृत्यु
पाथीभरामा दर्शन आएकी एक महिलाको मृत्यु
नेकपा सचिवालय बैठकका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ तयार
लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको आह्वानमा खुला रक्तदान
‘संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरमा बदलौं’
घुस लिएकाे अभियोगमा मुद्दा
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको पुस्तक ‘नयाँ राजनीतिक विश्लेषण’ प्रकाशित